MIUI 11 တည်ငြိမ်မှုသည် Xiaomi Mi MIX 2, Mi9SE နှင့်အခြားမော်ဒယ်လ်ငါးခုသို့လာသည် Androidsis
Xiaomi သည်နောက်ဆုံးပေါ်နံပါတ် ၁၁ ဖြစ်သော MIUI ဗားရှင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Mi9Pro ကို 5G နှင့်ကြေငြာချက် Mi MIX အာလဖ.
MIUI 11 သည်လူကြိုက်များသော user interface အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော update ဖြစ်သည်ယခုအခါ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များစွာတွင်စတင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအခြားမော်ဒယ်များမတိုင်မီ၎င်းကိုလက်ခံရန်ရွေးချယ်ထားသောကိရိယာများစာရင်းကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
MIUI 11 သည်မှောင်မိုက်သော mode ကို Xiaomi နှင့် Redmi ဖုန်းများသို့ပို့ဆောင်ပေးပြီးမီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အပြာအစားအနက်ရောင်စစ်စစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ MiLan Pro ဟုခေါ်သည့်ဖောင့်အသစ်တစ်ခုနှင့်အလွန်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော ambient display features အသစ်လည်းရှိသည်။ ထို့အပြင်သဘာဝမှပတ်ဝန်းကျင်အသံများကိုအသုံးပြုသည့်တက်ကြွသောအသံစနစ်ရှိသည်။ အသံများသည်တစ်နေ့လုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသောအရာများအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်အသစ်များများစွာပါရှိသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။
MIUI 11 ကိုလက်ခံသောကိရိယာများ။
mi9အရှေ့တောင်
Mi ရောနှော 2S
Redmi Note7Pro ကို
မှတ်မိဖို့ MIUI 11 ကို၎င်း၏တည်ငြိမ်သောပုံစံဖြင့်လည်းအခြားထုတ်ကုန်များသို့လည်းဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အမည်ရ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Redmi နှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံ၌၎င်းကိုလူကြိုက်များသော Redmi K20 စီးရီးဖြစ်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်မှ စတင်၍ ထုတ်ကုန်အများစုအတွက်ရရှိနိုင်သည့် beta ဗားရှင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် update ၏တည်ငြိမ်သော version ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါမဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်း, အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် Redmi Note 16 Pro နှင့်စတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီးထို နေ့မှစ၍ အခြားအမှတ်တံဆိပ်များရှိစမတ်ဖုန်းများ၌ရောက်ရှိမည်။
Xiaomi နှင့် Redmi ဖုန်းများအတွက်တရားဝင် MIUI 11 ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်များ!
Xiaomi ကအတည်ပြုပြီးတဲ့အချိန်ဇယားအတိုင်းကောင်းကောင်းလိုက်နေတာကိုး။ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ update ကိုမရရှိနိုင်သေးသောအခြားထုတ်ကုန်အမြောက်အမြားရှိနေတုန်းပဲ, ဒါပေမယ့်သူတို့မကြာမီဖျောပွ firmware ကိုအထုပ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်သေချာပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » MIUI 11 တည်ငြိမ်မှုသည် Xiaomi Mi MIX 2, Mi9SE နှင့်အခြားမော်ဒယ်ငါးမျိုးသို့လာသည်